Email Suuq Blog | Martech Zone
Iimayl-ka- suuq-geynta iyo suuq-geynta otomaatiga ah, xalalka, agabka, adeegyada, xeeladaha, iyo hababka ugu wanaagsan ee ganacsiyada ee ka yimid qorayaasha Martech Zone.
Joojinta: Xiritaanka heshiisyo badan oo ku saabsan Habka Suuqgeynta Ku-saleysan Koontada-Kannel-ka Badan (ABM)
Xeeladda suuq-geynta ugu waxtarka badan, ugu caqli badan, uguna hufan waa suuq-geyn xisaabeed ku salaysan (ABM). Ay ku kacday bartilmaameedka xogta ay horseedday iyo xeeladaha suuqgeynta kanaalka badan ee shaqsiyeeyay, ABM waxay ka caawisaa suuqgeynayaasha inay kordhiyaan beddelka oo ay koraan dakhliga. Terminus ABM Platform Waxa Terminus ka soocaya aaladaha kale ee ABM waa sida ay madalku si firfircoon ugu hawl gasho xisaabaadka bartilmaameedka ah, taas oo u sahlaysa suuqlayda inay abuuraan dhuumo badan. Terminus run ahaantii wuxuu bixiyaa hab dhammaystiran ABM sababtoo ah ka-qaybgalka kanaalka badan ee waddaniga ah ayaa keenaya natiijooyin badan. Terminus wuxuu caawiyaa xallinta caqabadaha ugu waaweyn ee suuq-geyayaasha
Hagaha Fudud ee Soo Jiidashada Hogaamintaada Dijital ah ee Kowaad
Jimco, Juun 3, 2022 Jimco, Juun 3, 2022 Aleksandra Korczynska
Suuqgeynta nuxurka, ololayaasha iimaylka ee tooska ah, iyo xayaysiisyada lacag bixinta-waxaa jira siyaabo badan oo kor loogu qaado iibinta ganacsiga khadka ah. Si kastaba ha ahaatee, su'aasha dhabta ah waxay ku saabsan tahay bilawga dhabta ah ee isticmaalka suuq-geynta dhijitaalka ah. Waa maxay waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad sameyso si aad u abuurto macaamiisha ku hawlan (hoggaanka) khadka? Maqaalkan, waxaad ku baran doontaa waxa dhabta ah ee hogaanku yahay, sida aad si dhakhso ah ugu abuuri karto hogaan online, iyo sababta jiilka rasaasta organic uu u xukumo xayaysiis lacag ah. Waa maxay